धुर्कोटको आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास नै मेरो एजेन्डा – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
धुर्कोटको आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास नै मेरो एजेन्डा
१८ बैशाख २०७९, आईतवार ०६:५०
नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका महेन्द्रप्रसाद भण्डारी २०५० सालमा रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघ गुल्मीको सभापति हुँदै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसको १०औँ महाधिवेशनबाट उहाँ निरन्तर महाधिवेशन र महासमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ ।
भण्डारी नेपाली कांग्रेसमा मात्र नभई अन्य दलसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सफल नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा लिएर अघि बढ्ने भण्डारीले निरन्तर समाजसेवामै समर्पित हुने उद्देश्यका साथ अहिले आफू धुर्काेट गाउँपालिकाका लागि अध्यक्षको उम्मेदवार भएको बताउनुभयो । अहिलेको वर्तमान अवस्था, गठबन्धन र धुर्काेट गाउँपालिकालाई अघि बढाउने भावी योजनाबारे हिमालय टाइम्सका बुटवल संवाददाता चन्द्रकान्त खनालले अध्यक्षका उम्मेदवार महेन्द्र भण्डारीसँग गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :-
धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ ? के छन् एजेन्डा ?
धुर्कोटको आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो । सर्वसाधारण जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुने गरी जनताको जीवनस्तरमा समतामूलक विकास गर्नु नै मेरो कर्म हो । धुर्कोट गाउँपालिकाका सातै वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगार, सडक र खानेपानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी समग्र धुर्कोटको समानुपातिक विकास गर्नु नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो ।
तपाईंले जित्ने आधार के-के छन् ?
धुर्कोटको समानुपातिक विकासको मुख्य एजेन्डा लिएर इमान, निष्ठासहित जनताका माझ आउँदै छु, यही नै मेरो मुख्य जित्ने आधार हो । जनताले मेरो इमान, निष्ठा, विकास उन्मुख राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका छन् । महेन्द्र भण्डारी निर्वाचित भयो भने विकासमा विकेन्द्रीकरण र समानुपातिक विकास ल्याउँछ भन्ने आशा धुर्कोटका नागरिकले राखेका छन् र त्यो नै मेरो जित्ने प्रमुख आधार हो ।
यदि तपाईं गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नुभयो भने समृद्ध धुर्कोट बनाउन के-के गर्नुहुन्छ ?
तपाईंलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास नै मेरो मुख्य मन्त्र हो । जसमा सडक बाटोको समस्या, कृषि तथा पशु समस्या, कृषि अनुदानको चरम दुरूपयोग रोक्नुपर्नेछ, बजारको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ, सिँचाइको अभाव समाधानदेखि प्रभावकारी खोप कार्यक्रम र रोजगारीको समस्या समाधान हुनेछ ।
तपाईं गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धन भए तापनि धुर्कोटमा भएको एमाले माओवादीको गठबन्धनलाई कति मतले जित्छु भन्ने लागेको छ ?
मतदान भनेको जनताले विवेक प्रयोग गरेर गोप्यरूपमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा हो । इमान र निष्ठाका लागि जनताले महेन्द्र भण्डारीलाई राम्रै मतान्तरले विजय गराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
अघिल्लो कार्यकालमा तपाईं र माओवादीबीच सत्ता सहकार्यमा सहमति भएको थियो भन्ने सुनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएन, वास्तवमा के भएको थियो ?
जनप्रिय नेता एवं पूर्वसांसद स्वर्गीय रुद्रमणि भण्डारी, जनप्रिय नेता एवं पूर्वसांसद टंक पोख्रेललगायत दुई पार्टीका नेताहरूबीच अहिलेको अध्यक्ष माओवादीलाई दिने र अर्को कार्यकालमा कांग्रेसले प्रमुख पद पाउने भनी एकखालको सहमति भएको थियो तर हालका प्रत्यासी भुपाल पोख्रेलले पुरानो सहमतिलाई वास्ता गर्नुभएन र उहाँले अरू पार्टीको आडमा सत्तामा रहिराख्ने मनसाय देखाउनुभयो । तर, अहिले सबै पार्टीका साथी एवं अग्रजहरूले इमानको राजनीतिका लागि मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धन एकातिर रहँदा तपाईं कत्तिको आत्तिनुभएको छ ?
आधाभन्दा बढी जीवन राजनीतिमा अडिग, निरन्तर र निष्ठाका साथ बिताएको छु । आत्तिने र मात्तिने कुरा छँदैछैन ।
मेरा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्र्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद । आवश्यकतामा आधारित समग्र धुर्कोटकै दिगो विकास एवं सेवामुखी इमान र निष्ठाको राजनीति जोगाउनका लागि एकपटक महेन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई भोट दिन सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
भलिबल संघ कञ्चनपुरको अध्यक्षमा
माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक
महालक्ष्मी लाइफद्वारा पुँजी वृद्धिको
नेपाल चलचित्र संघमा वीरेन्द्रको